Madaxweynaha Hirshabeelle oo xariga ka jaray mashaariic laga fuliyay Degmada Warshiikh.+Sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Madaxweynaha Hirshabeelle oo xariga ka jaray mashaariic laga fuliyay Degmada Warshiikh.+Sawirro.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo xariga ka jaray mashaariic laga fuliyay Degmada Warshiikh.+Sawirro.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Degmada Warsheekh ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa xarigga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgaliyay halkaasi.
Previous articleDowladda Federaalka oo agab loogu talogalay lasocoka is beddelka cimillada geysay Kismaayo.
Next articleSii hayaha Wasiirka Gargaarka XFS iyo wafdi uu hoggaaminaayo oo gaaray Dhuusamareeb.